Spotify iyo aaladdiisa si loo ogaado xogta waxqabadka sanadlaha ah | Wararka IPhone
Marka waad garan kartaa imisa daqiiqo oo muusig ah oo aad ka dheeratay intii lagu jiray sanadkii 2017 barnaamijka Spotify
Muusiggu waa qayb ka mid ah maalmaheenna oo waqti ka dib waxaa soo muuqday codsiyo iyo adeegyo cusub oo sahlaya in heesaha la ciyaaro Apple waxay bilawday adeeg u gaar ah dhawr sano ka hor, Apple Music, iyo maanta waxay si toos ah ula tartami kartaa Spotify inay tahay mid ka mid ah adeegsiga baahinta muusigga xilligan. Spotify waxay daabacday degel aan wax ka arki karno soo koobida waxqabadkayaga inta lagu gudajiray 2017 barnaamijkaaga. Haddii aad tahay isticmaale daacad ah adeegan muusigga qulqulka ah, waxaan ku bari doonaa sida loo ogaado imisa daqiiqo oo muusig ah ayaad dhageysatay sanadkan.
Spotify wuxuu kacaawiyaa shabakadaha iyada oo la soo koobayo waxqabadkeeda sanadlaha ah ee cusub
Sannad kasta, Spotify waxay diyaar u tahay dadka isticmaala madal aad ka baran karto waxqabadka adeegsade kasta oo ka tirsan adeegga: tirakoobka, isbarbardhigga ... Waa hab wanaagsan oo lagu ogaan karo xog xiiso leh oo ku saabsan isticmaalka aan siinno barxadda oo aan ogaanno muusig noocee ah ayaan dhageysanaa inta badan ama imisa heesood oo kala duwan ayaan maqalnay sanadkii tagay.
Hadda waa la heli karaa Wareega sanadlaha ah ee 'Spotify' Haddii aad rabto inaad marin u hesho, waa inaad si fudud u soo gasho xidhiidhkan oo gasho xogta Spotify. Haddii aad ka furto aaladda aad koontada ka bilowday, waxay kugu filnaan doontaa inaad ka oggolaato marin u helidda dalabka laftiisa. Markaad gudaha gasho waxaad marin ka heli kartaa tirakoobka aan kaga hadlaynay qodobkaan.
Inta badan qaybaha kala duwan waxaad awoodi doontaa inaad dhexgalaan adoo adeegsanaya su'aalaha qaarkood ee ku saabsan is dhexgalka maxaad u maleyneysaa inuu ahaa nooca aad inta badan dhageysatay sanadka gudihiisa, fanaanka aad jeceshahay ama heestaada ugu dhageysiga badan. Kadib, waxaad awoodi doontaa inaad ogaato tirada daqiiqadaha muusigga la dhageystay, tirada heesaha iyo noocyada kala duwan iyo fanaaniinta la ciyaaray. Ugu dambeyntii, waxaad kala soo bixi kartaa sawir leh dhammaan tirakoobyada si aad ugula wadaagi karto shabakadaha bulshada asxaabtaada.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Noticias » Marka waad garan kartaa imisa daqiiqo oo muusig ah oo aad ka dheeratay intii lagu jiray sanadkii 2017 barnaamijka Spotify
Aniga aragtidayda, wali waa madal muusigga qulqulka ugu caansan ee ay adeegsadayaasha adeegsadaan Aniguna waxaan jecelahay inaan ku arko barnaamijka muusigga sanadlaha ah ee madalkan.
IPhone wuxuu sii wadaa inuu noqdo kamaradda ugu caansan ee Flickr